Factlọ ọrụ na-ahụ maka ọrịa anụmanụ - China Ndị na-emepụta ọrịa anụmanụ, ndị na-eweta ya
Ngwa a na-eji usoro PCR fluorescent oge iji chọpụta RNA nke nje Pseudorabies (gB gene) (PRV) na arịa ọrịa anụ ahụ dịka tonsils, lymph nodes na splin na mmiri ọrịa ihe dịka ogwu na ọbara ezì.
Afrịka swine fever virus PCR nchọpụta kit
Ngwa a na - eji usoro PCR fluorescent oge iji chọpụta DNA nke nje virus swine Africa (ASFV) na arịa ọrịa anụ ahụ dịka tonsils, lymph nodes na splin na mmiri ọrịa ihe dịka ogwu na ọbara ezì.
Ihe nnochi swine fever RT-PCR Kit
Ngwa a na-eji usoro RT-PCR fluorescent oge iji chọpụta RNA nke nje virus Swine (CSFV) na arịa ọrịa anụ ahụ dị ka tonsils, lymph nodes na splin na mmiri ọrịa ihe dịka ogwu na ọbara ezì.
Viruskwụ na-ọnụ nje virus RT-PCR nchọpụta Kit
Ngwa a na-eji usoro RT-PCR fluorescent oge iji chọpụta RNA nke ọrịa ụkwụ na ọnụ (CSFV) na arịa ọrịa anụ ahụ dịka tonsils, lymph nodes na splin na mmiri ọrịa ihe dị ka ogwu na ọbara ezì.
Cdị ihe nkiri PCCine Circovirus 2 PCR
Ngwa a na - eji usoro PCR oge na - acha ọkụ ọkụ iji chọpụta RNA nke ụdị 2 (PCV2) nke Porcine circovirus na arịa ọrịa anụ ahụ dịka tonsils, lymph nodes na splin na mmiri ọgwụ ihe dị ka ogwu na ọbara nke.
Porcine oria afọ ọsịsa virus RT-PCR nchọpụta kit
Ngwa a na - eji usoro RT-PCR fluorescent oge iji chọpụta RNA nke ọrịa ọrịa afọ ọsịsa nke Porcine (PEDV) na arịa ọrịa anụ ahụ dịka tonsils, lymph nodes na splin na mmiri ọgwụ ihe ndị dị ka ogwu na ọbara ezì.
Porcine omumu na akụkụ okuku ume na nje virus RT-PCR Detection Kit
Ngwa a na - eji usoro RT-PCR fluorescent oge iji chọpụta RNA nke Porcine ịmụ nwa na akụkụ okuku ume na nje virus nchọpụta nuklia (PRRSV) na arịa ọrịa anụ ahụ dịka tonsils, lymph nodes na splin na mmiri na arịa ọrịa dị ka ogwu na ọbara nke ezì.